Shirkad la magac baxday Ponuts Marine Limited oo iibinaysa saamiyo si ay u kobciso kaluumaysiga Somaliland ayaa lagu daahfuray 29/06/2013 | Salaan Media
Shirkad la magac baxday Ponuts Marine Limited oo iibinaysa saamiyo si ay u kobciso kaluumaysiga Somaliland ayaa lagu daahfuray 29/06/2013
July 3, 2013 | Published by: Hamse
Shirkad la magac baxday Ponuts Marine Limited oo iibinaysa saamiyo si ay u kobciso kaluumaysiga Somaliland ayaa lagu daahfuray 29/06/2013 masarax Peopl’s Palace ee ku yaala jaamacada wayn ee Queen Mary University ee bariga London.
Waxaa kulankaa kasoo qaybgalay dawayne aad u tiro badan oo isugu jiray Salaadiin, aqoonyahano, ganacsato iyo bulshowayn xiisaynaya fursadan maalgashi ee cusub.
Maamulaha shirkad Mr. Mohammed Yusef Ali Guray ahna mulkiilaha Invicta Capital Limited ayaa sheegay in abuurka shirkadani ay ku timi baadhis cilmiyeed laga fiirsaday mudo aad u badan taasoo natiijadeedu ay noqotay in loo hawl galo sidii loo soo saari lahaa khayraadka badeena jiifa oo looga faa’iidayn lahaa ummadeena looguna abuuri lahaa fursado shaqo, gancsi iyo ka qaybqaadashada kaabayaasha dhaqaalaha ee wadankeena qaaliga ah.
Shirkadu waxay ka bilaabi doontaa hawlgalkeeda ugu horaysa Maydh halkaasoo ay ka dhisi doonto daked ku meelgaadh ah iyadoo qorshuhu yahay in la dhiso dakad tayo leh kadib; iyo qaboojiye aad u baaxad wayn oo kaluunka lagu qaboojiyo. Kadib waxay u gudbi doontaa ilaa iyo Berbara oo ay iyana ka dhisi doonto qaboojie la mid ah kii ay ka dhistay Maydh iyo waliba rug lagu qaybiyo kaluunka loogana dhoofin karo dunida oo dhan.
Mudane M. Yusef waxa uu yidhi “Hirgalinta mashruucani waa tusaale muuqda oo lagu kobcinayo hormaka dhaqaalaha ee wadanka” isagoo sii wata hadalkiisa waxa uu yidhi ” Umadda waliba iyaga dhista wadankooda, waana waajib inaynu gacmeheena oo wada jira ku dhisano wadankeena”.
Shirkadu waxay go’aansatay in hawlgalkeeda ay ka bilawdo Gacanka Cadan (khaasatan inta u dhaxaysa Maydh iyo Berbera) halkaasoo ay ku yaalaan khayraadka uu kaluunku quuto ee ugu qanisan aduunyada, taasoo kobcisa taranka in kabadan 600 oo noocyo kala duwan oo kaluun ah sida tuna, libaax badeed, kancad, shirm iyo qaar kale oo badan oo aad qaali ugu ah sayladaha aduunyada.
Mr. M. Yusef isagoo sii wata hadalkiisa waxa uu sheegay in ay Shirkadu waxay u bandhigayso shacabka Somaliland inay iibsadaan saami qiimihiisu yahay $1 oo aan xadyasnayn ilaa laga gaadhayo $5 milyan oo doolar oo u furan cid kasta. Shirkadu waxay filaysaa inay macaash samayso sanadka sadexaad waayo waa inay marka hore u hawlgashaa sidii ay u soo celin lahayd raasamaalkii galay shirkada dibna ugu celin lahayd saamilayaasha raasamaalkoodii ay galiyeen shirkada iyagoo intaa wixii ka danbeeya ay filayaan macaash (idinka Illaahay). Maalinta ugu danbaysa ee uu xidhmayo saamiga iibkuna waa 30/10/2013.
Suuqayada ay Pontus Marine Limited rabto inay ka hawolgasho waxaa ugu horeeya Somaliland kadibna Ethiopia oo ay ku nool yihiin 85 milyan oo qof iyo saylahda gacanka khaliijka sida UAE, Qatar iyo Saudi Arabi iyo China.
Mr. Mohamed Yusef waxa uu kusoo gababogabeeyay hadalkiisii isagoo u mahad naqaya dadkii kasoo qayb galay kulankaas uguna baaqay shacbka inay kala qaybgalaan fursadan si loo dhiso wadkneena.
Lasoco Video dhawaan Inshallah